Momba anay - Jiangsu Huanyi Industrial Co., Ltd.
Ny orinasanay dia manolo-tena hamokatra vokatra avo lenta mangatsiaka sy mafana
Jiangsu Huanyi Industrial Co., Ltd. dia orinasa mpamokatra teknolojia vaovao. Ny orinasa dia nanolo-tena tamin'ny fampandrosoana ny vokatra gilasy gel ho an'ny hatsaran-tarehy manokana / salama ara-pahasalamana / ara-panatanjahantena / fanatanjahan-tena / fikolokoloana isan-trano mampitony fitsaboana mafana sy mangatsiaka nanomboka tamin'ny 2012.
Manome fialan-tsasatra, fitsaboana ara-batana ary fanampiana voalohany amin'ny fiainana izahay, ny vokatra dia voamarina amin'ny SGS, FDA, CE, REACH, AZO, PROP65, orinasa miaraka amin'ny fanaraha-maso BSCI, manana traikefa iarahana amin'ny LIDL, ALDI, Wal-mart ary Disney.
Ny orinasa dia manana vokatra marobe mivarotra mafana toy ny fonosana gilasy, saron-tava beady, fehin-kibo mihetsiketsika miaraka amina fonosana mangatsiaka mafana, ba kiraro fitsaboana mangatsiaka, pad microwave fanafanana, kitapo misy ranomandry, izay mety ho betsaka
ampiasaina amin'ny fitsaboana mafana sy mangatsiaka, fanatanjahan-tena Fahasalamana, fikarakarana reny sy zaza, sns. Manaraka ny fitsipiky ny "famoronana mitohy sy ny fahafaham-po ny mpanjifa" izahay ary manantena amim-pahatokiana fa hanome izany amin'ny vidin'ny fifaninanana ho an'ny fiainana salama.
Manana departemanta R&D manokana izahay afaka manaingo ireo vokatra arakaraka ny foto-kevitrao, ny milina fanapahana laser mba hahazoana antoka fa marina ny endrika, ny fanaovana pirinty UV dia afaka mamolavola lamina maro loko, ny bobongolo vita amin'ny tanana no mahatonga ny fiainana maharitra ho an'ny vokatrao, valin'ny mpiasa 120 amin'ny fandefasana. Ny tanjonay dia ny hanome vokatra avo lenta sy lafo vidy amin'ny fandefasana haingana sy serivisy tsara indrindra.
Ny fonosana ranomandry rehetra dia mandeha amin'ny fanandramana fanaraha-maso ary mandini-tena alohan'ny fonosana, ny gel tsy misy poizina mihidy ao amin'ny PVC, EVA, TPU dia mety hivoaka aorian'ny hafanana be loatra na fanerena, ratsy ho an'ny traikefan'ny mpanjifa izany, ny orinasan-tsika dia manao izany rehetra izany, voafehy ho an'ny ny ranomandry rehetra.
Ny anjarantsika any ivelany
Jiangsu Huanyi Industrial Co., Ltd. dia manolo-tena amin'ny famokarana vokatra mangatsiaka sy mafana mafana avo lenta. Ny orinasa dia mirotsaka amin'ny fampivoarana ny vokatra, ny fampandrosoana ary ny famokarana (ny fizotrany rehetra dia afaka misotro mivantana rano voadio) sy ny varotra. Miaraka amin'ny asa mafy ataon'ny mpiasa teknika sy varotra rehetra, ny orinasa dia nahavita nanolotra vokatra mangatsiaka sy mafana avo lenta avo be ho an'ny mpanjifa ao an-trano sy any ivelany.
Ny vokatra dia aondrana eran'izao tontolo izao, ny firenena lehibe sy ny faritra dia 40% any Eropa, 30% any Amerika, 15% any Japon ary Korea 5%, ary 10% any amin'ny firenena na faritra hafa. vokatra avo lenta, vidiny mirary, fanaterana ara-potoana ary laza tsara. Manantena mafy izahay fa hiara-hiasa amin'ny mpanjifa ao an-trano sy any ivelany. Miaraka amin'ny ezaky ny mpiasa rehetra eran'izao tontolo izao, dia ho lasa orinasa mitarika eo amin'ny sehatry ny indostria izahay ary hamorona ho avy mamiratra amin'ny indostrian'ny mangatsiaka sy mafana!
Firenena sy faritra hafa
Meteza ho mpianakavy eto, afaka mankafy ny fitahirizam-boky sy ny tobim-pahasalamana izy ireo mba ho salama tsara amin'ny vokatray!
Tongasoa eto hitsidika ny ozinina na ny trano heva isan-taona amin'ny foara sy fampirantiana.
Miresaha aminay, ho hitanao ny vokatra fonosana ranomandry mafana sy mangatsiaka mety aminao!